I-CaveExpress, umdlalo weqonga we-2D weklasikhi | Ubunlog
I-CaveExpress, iqonga le-2D yakudala
ICaveExpress yiyo un i-classic 2D yesikhulumi isethwe kumaxesha angaphambi kwembali. Udlala njengomlinganiswa onxibe njengomqolomba. Ukusinda kubalulekile, njengoko iidinosaurs, iimammoth kunye neentlanzi ezinkulu ziya kufuna ukukubulala.
Ngexesha lomdlalo siza kulawula umatshini ophaphazelayo onikwe amandla ziiphedi kwaye zenziwe ngeentsontelo, amagqabi kunye neentonga. Njengenjongo kuyo yonke imisebenzi, kuya kufuneka siqokelele iibhokisi sizise kwenye indawo. Kubonakala kulula, kodwa Ubuncinci bezakhono ziyafuneka ukuze kuqinisekiswe ukuba sinokulawula umatshini wokubhabha, ngaphandle kokubetha umgangatho okanye isilingi yomqolomba ngamandla amakhulu. Ukuba awuphumeleli, impilo yomlinganiswa wakho iya konakala kakhulu. I-physics yomdlalo isebenza kakuhle kwaye iya kwenza izinto zibe nzima kuwe.
Ukongeza kuthintela amarhamncwa kunye nokuqinisekisa ukuba asiwi kubude obukhulu kakhulu, Kuya kufuneka sigqibe imisebenzi ebandakanya ukuhanjiswa kweephakeji kunye nabakhweli. Njengokuba ukuqhekeka ezindongeni kungenakuphepheka ukuba kwenzeka kwiimeko ezininzi, impilo yomlinganiswa iya kuncipha. Ngethamsanqa, kwimishini emininzi siza kufumana amatye, athi xa ewiswe emithini, abangele ukuba iziqhamo ziwe eziza kusivumela ukuba sibuyisele impilo yomlinganiswa wethu kancinci.
1 Iimpawu ngokubanzi zeCaveExpress
2 Ukufaka iCaveExpress ku-Ubuntu
2.1 Ukujonga ngokukhawuleza kumdlalo
Iimpawu ngokubanzi zeCaveExpress
Umdlalo ubonakalisa Imowudi yabadlali abaninzi evumela ukuya kuthi ga kubadlali aba-4 sebenzani kunye ukusombulula iimephu.
Imizobo inqaku Iinkcukacha ezininzi, kunye neminyaka yesandi yesandi bongeza umoya kumdlalo.
Sinako yenza imikhankaso kunye neemephu ngomhleli wemephu oko kuza kuhlanganiswa.
I-CaveExpress ibonelela nge-twist yoqobo kwiqonga. Nazi iindidi ezintle zeenjongo ukongeza kwiibhokisi zokuqokelela. Amanye amanqanaba afuna ukuba sihambise abagibeli, sihambise into ngaphakathi kwexesha elithile, ukuhamba ngamatye, amanzi kunye nokunye okuninzi.
Inenjini ye-physics oko kuyakwenza izinto zibe nzima ngakumbi, ukwenza umdlalo ube nzima ngakumbi.
ICaveExpress yiyo iyafumaneka kwiGnu / Linux, Android, MacOSX, Windows kunye HTML5.
Ikhowudi yalo mdlalo inokufumaneka kwi GitHub.
Ukufaka iCaveExpress ku-Ubuntu
Kwiinkqubo zeDebian / Ubuntu kukho iphakheji ekhoyo kwindawo yokugcina izinto. Ngesi sizathu, ukufaka lo mdlalo kulula njengokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokwenza umyalelo kuyo:
Nje ukuba ukufakela kugqityiwe, ukuqhuba umdlalo kuya kufuneka kuphela khangela isiqalisi kwiqela lethu.
Ukujonga ngokukhawuleza kumdlalo
Eyona njongo iphambili yeCaveExpress kukuqokelela iipakeji kwaye uzishiye kwindawo yokuhambisa.
Siya kuba nakho ukufumana amanqaku amaninzi kunye neenkwenkwezi ngokukhawuleza esilawula ukwenza umsebenzi ophathisiweyo. Siza kuba nakho ukufumana amanqaku ongezelelweyo xa sitshaya idayinaso.
Ukubetha iindonga ngamandla kunokubangela ukuba umatshini wethu ophaphazelayo uwele, nto leyo eza kusenza ukuba siqale phantsi.
Kuxhomekeke kwinqanaba lobunzima obukhethileyo, unokufuna ukuseta inqanaba kwakhona ukuba ulahlekelwe ubomi abathathu obufumanekayo kwiphulo ngalinye.
Singahambisa iipakeji ezininzi ngaxeshanye, kodwa oku kuyakwenza ukulawula umatshini wethu ophaphayo kube nzima.
Beka ilitye kufutshane nendawo yokuqokelela inokusinceda xa sizama ukubeka ipakethe kwindawo yayo.
Ukulawula isimilo sethu, sinako sebenzisa izitshixo zetolo ukulawula uphawu kunye isithuba sendawo yokukhupha iimpahla esiziqokelelayo.
ukuba susa umdlalo kwiqela lethu Sifuna nje ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye senze umthetho:
Kumdlalo unokufumana isifundo apho unokuzithemba khona ukuze ukwazi ukudlala ngeziqinisekiso. Ngolwazi oluthe kratya malunga nalo mdlalo, abasebenzisi banako dibana ne- iwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » I-CaveExpress, iqonga le-2D yakudala
Ndiyaphambana ndikhangele ulwimi kwaye akukho ndawo apho lubhekisa kuyo nantoni na ke ndiyitolika ukuba ingesiNgesi kuphela hayi kwiSpanish.
Unikwe inyathelo lokuqala elibalulekileyo: Ubuntu 21.04 sele isebenzisa i-Linux 5.11